Hutano, 01 Mbudzi 2017
Sangano reFamily Aids Caring Trust Rosvitsa Makore Makumi Matatu
Sangano reFamily Aids Caring Trust, FACT nhasi rapemberera kusvitsa kwaro makore makumi matatu raumbwa richipa vagari vekwaMutare mukana wekuvhenekwa pachena zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira gomarara, HIV, kuchecheudzwa nezvimwewo.
Chirwere che typhoid chinonzi chanyuka muHarare zvakare zvave kupa kuti veruzhinji vatyire hupenyu hwavo sezvo kanzuru iri kutadza kutakura marara pamwe nekugadzirisa pombi dzinotakura tsvina munzvimbo dzakawanda muguta iri.
Tajamuka Yochengetedza Vanhu kuChitungwiza?
Nhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwiza nemusi weSvondo, dzamiswa pamberi pematare nhasi dzikabhadhariswa mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu.
MDC-T Yorwadzikana Zvichitevera Kukuwadzwa kweNhengo Dzayo kuChitungwiza
Nhengo dze MDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika kuChitungwiza nemusi weSvondo, dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvadzwa zvakanyanyisa.
Zvirwere Zvisingatapuriranwi Zvovhiringa Vakawanda
Mumwe chiremba anoshanda nesangano rinorwira kodzero yehutano, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Norman Matara, vanoti zvirwere zvisingatapuriranwi zvinotora nguva zviri mumuviri munhu asingazive.
Mhirizhonga Inotyisa Yoitika kuChitungwiza
VaDelma Amos Kaliyati veMDC vakakuvadzwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika kuChitungwiza neSvondo.